Isithuthuthu "I-Suzuki-Intruder": imininingwane kanye nokubuyekezwa
Uchungechunge lwe-Suzuki-Intruder lwalusungulwa futhi lwenziwa ngokubheka ukukhula okudingekayo kwezithuthuthu ze-cruise. Idalwe eJapane, ithola izici eziningi ezivela embonini yemoto yaseMelika.
Ihlanganisa izinhlobo eziningana, eziningi zazo ezihamba ngamanzi ahlanzekile, ezenzelwe imigwaqo ende. Kodwa kukhona kuwo futhi ejwayelekile ngamabhayisikili omuzi, asebenza ngesitayela se-chopper.
Umkhiqizi ukhethe igama elithi "Intruder" hhayi ngengozi. Ayinayo inguqulo yangempela ngesiRashiya, kodwa incazelo yayo incishisiwe ibe yizincazelo ezinjengokuthi: "Umnqobi", "Umculi", "Ummangaleli". Kula mazwi, izinhlelo zokuziqhenya zomkhiqizi zokuthola ingxenye yamakethe zifundwa kalula. Okuhlangenwe nakho kwezokuthengisa e-US naseYurophu kuqinisekisa ibhayisikili elidala ukuthi igama lomkhumbi lithatha isiphetho salo esizayo. "Ummangaleli" uphelelwe umsebenzi: wahlasela ngempumelelo insimu enikezwe yona, wathola abalandeli abaningi futhi ngeke azinikezele.
Owokuqala ochungechungeni yi-Suzuki-Intruder 750 ngesithuthuthu. Wabonakala ngo-1985. Leli yunithi yayihlelwe emakethe yase-US, kodwa cishe ngesikhathi esifanayo e-United States umthetho omusha wakhishwa, ngokusho ukuthi ukunikezwa kwezithuthuthu nge-volume 750 noma ngaphezulu "cubes" kwakuhambisana nemisebenzi ephakeme kakhulu. Umkhiqizi wasabela masinyane - futhi kwakukhona imodeli ye "Intruder" enesisindo esingaba ngu-699 cm 3 .
Eminyakeni emibili kamuva, inkampani "Suzuki" yazisa umhlaba oyedwa oyisibonelo esivela kulolu chungechunge - Intruder 1400. Ngaphandle kwakufana nabandulelayo, kodwa ehluke kakhulu kubo ngokwezimpawu. Ngo-1992, esekelwe ku-Intruder 750, enye inguqulo yakhiwe ngenjini engamamitha ayi-800 cubic. Kamuva lo modeli waba yisibonelo "sabafowethu abasebasha" - ngamamitha angu-400 no-600 cm.
Lolu chungechunge lwakhiqizwa ngaphambi kuka 2005. Ngokulandelayo, i-Intruder, i-Marauder ne-Desperado uchungechunge yahlanganiswa yaba yi-Boulevard eyodwa. Namuhla kungaphansi kweli gama ukuthi lezi zithombe zakhiwe kanye uma kukhishwa umndeni wakwa-Suzuki-Intruder.
Ukuziqhenya kwalolu chungechunge kufana nokubukeka okufanayo kwazo zonke izinhlobo. Izici ezihlukile ziyancishiswa kuphela kwiyunithi yamandla. Ngokungaqondile, kungcono kunzima ukuhlukanisa izinhlobo ezivela kulolu chungechunge oluvela ngaphandle ngezimpawu zangaphandle.
Ukubukeka kwe "Abangenayo" kukhanya kakhulu, akulibaleki. Ekubukeni kuyi-cruise-cruiser evamile, enikezwe ezinye izici zenkambiso.
Izici ze-Intruder 400
Omunye angathatha lo modeli njengesikebhe esivamile, kodwa umagazini weForbes uke wanikela kuqala endaweni yokuphakanyiswa kwe "Best Motorcycle for the City". Futhi lokhu kufanelekile: ibhayisikili inomsebenzi omuhle kakhulu, ukulinganisa okulinganiselwe, kuyonciphisa okuqukethwe kwayo.
I-Suzuki-Intruder 400 uchungechunge inokuguqulwa okubili:
I-VS 400 (1994-1999);
400 Classic (2000 - kuze kube manje).
Ukungezwani kwabo kungokwesimo sangaphandle. Izithuthuthu zesizukulwane sokuqala zineziphazamiso zokuqeda ohlangothini ngalunye, amasondo akhulu, futhi amaphiko amancane. Inguqulo "ye-Classic" ifakwe ngamaphiko amakhulu, kokubili amapayipi okukhipha angakwesokudla, ububanzi bamavili buyi-17 ', okungamamitha angu-2 ububanzi obungaphansi kwesandulela.
Zombili izinguqulo zinezinjini ezimbili-cylinder zika 399 cm 3 futhi zinamandla angu-33 no-32 amalitha. Nge. Ngokulandelanayo.
Amadivayisi acishe afane, ahluke kuphela umahluko omncane ngevolumu. Zombili izithuthuthu zinamandla amakhulu angu-55 "amahhashi," enesisindo esingama-200 kg. Impendulo yabanikazi ibonisa ukuthi "abangamakhulu ayisishiyagalombili" banesifiso esikhulu sokwenza uphethiloli. Isivinini esivumelanayo sokuhamba ngalezi zindlela zitholakala ku-100-110 km / h. "I-Suzuki-Intruder 800" ingahlakazeka futhi ngaphezulu, kodwa kudingeka ube nakho okuningi kokushayela lokhu. Injini izobhekana, kepha umshayeli kufanele aqiniseke ukuthi uzophatha.
Ngokuqondene nangaphandle, isiteji sazo zombili izinhlobonhlobo sifana. Phakathi neminyaka yokukhiqiza, uchungechunge oluthile lwaqalwa, oluhluke komunye nomunye ngezici ezingabalulekile. Isibonelo, ukumaka kuka-EL kubonisa ukuthi isithuthuthu sinamathebhu engeziwe womzimba we-chrome.
Amamitha angu-1400 "
Ibhayisikili yesibili ekuxhumaneni iyinithi enamandla, enezinjini ezine-stroke ngenani lika-1360 cm 3 . "I-Suzuki-Intruder 1400" - lokhu kuyi-cruiser ejwayelekile, enikezwe ukubonakala komuntu. Yakhelwe phezu kohlaka lwensimbi, olunezintambo ezinama-spiked kanye nesiphequluli esiphezulu. Ukumiswa okulula ngendlela yefoloksi ye-telescopic kanye ne-absorber double shock absorber kuqinisekisa ukuhamba okushelelekile ngisho nasemgwaqweni omkhulu ongeyona imicu ephezulu kakhulu.
Injini iyakwazi ukukhiqiza kuze kube ngu-72 amalitha. Nge. Isisindo esomile sesithuthuthu sinama-243 kg. Isithuthuthu sakhiwe ngezihumusho eziningana, eziqondiswe ezimakethe zaseCanada nase-USA. Kusukela ngo-2008, lo modeli usuvele ushicilelwe njengengxenye yeBolivard line, nakuba ayengenanga izinguquko eziphawulekayo.
I-Giant enenhliziyo eyi-1.8-litre
"I-Suzuki Intruder 1800" i-flagship yangempela. Futhi hhayi kuphela phakathi kwemikhiqizo yomkhiqizi, kodwa futhi ekilasini labahamba ngezinyawo. Ikhishwe ngezihumusho eziningana:
I-M1800R2 - enekhanda elikhanyisiwe futhi lingenayo i-front fairing;
I-C109RT - ukuguqulwa okudala nge-accessory yokufinyelela;
I-M109R i-BOSS iyinhlangano ye-premium yemidwebo emibili yethoni enomnyama kunezingxenye ze-chrome.
Ukugcina kokubili kokuguqulwa kwavela njengengxenye yomndeni "weBolivard". Kodwa ubuso obubonakalayo bokuthi "u-Suzuki-Intruder" walondolozwa ngokuphelele. Umehluko omkhulu phakathi kokuguqulwa kwaphinda kwehliswa kwaba ukubukeka, hhayi ezibucayi. Ngokuyinhloko, lokhu kungezwani kuncishiswa kuze kube yinhlangano yesikhanyiso esingaphambili. Kungaba yi-version ene-neked, ehlanganiswe ku-fairing noma eyakhiwe enkampanini ephezulu yomoya.
Izici zobuchwepheshe zalesi simodeli zifanelwe ukunakwa, ngoba isithuthuthu asikho izifanekiselo eziningi, ngandlela-thile ngisho nanamuhla kusabalulekile.
Ama-cylinders yendabuko emndenini wezimoto ezinama-V ahlukaniswe komunye nomunye nge-angle ka-54 °. Le injini iyakwazi ukukhiqiza amalitha angu-115. Nge. Ngo-6200 rpm. I-Fuel inikezwa nge-injection. Uhlelo lwe-braking nalo lunokwethenjelwa kakhulu. It inikezwa i-disk-brake amabili ne-3-piston caliper engxenyeni yangaphambili futhi i-disk eyodwa yahlaselwa ngemuva. Isithuthuthu ifakwe i-cardan drive kanye nokudluliselwa kwejubane le-5.
"Intshonalanga" ezindaweni ezikude
Ubufakazi babanikazi bufakazela ukuthi leli bhayisikili linamandla amakhulu. Ngisho nalabo abakhukhume kakhulu futhi bakhetha ukuhamba edolobheni lakubo, bejabule kakhulu abesifazane basendaweni, ekugcineni umgwaqo omude uqala ukubamba. Umphefumulo wezokuvakasha wangempela webhayisikili ubonakala, uhamba nawo kanye nomnikazi.
Kuyathokozisa ukwazi ukuthi i-geographic of travelers 'travels ihlanganisa lonke leli zwekazi. Imizila eyanelisayo eYurophu namazwe aseMpumalanga Ekude ayethuki labo abaye baqhutshwa emigwaqweni yaseRussia emangalisayo. "Intukuthelo" inqoba kalula kokubili, nakwabanye. Ukumiswa okunamandla, okungaziqhayisa ngisho nomncinyane kunabo bonke - ku-"amakhulu amane" - ukubhekana kalula nazo zonke izimpungushe nokucindezeleka.
Kulezi zibuyekezo ngokuvamile kuvutha isihloko somzimba wendikimba eyengeziwe. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, lokhu kusebenza emathuneni, ngoba ngokuhamba kwesikhathi umuntu kufanele athathe konke okudingekayo.
Abakhiqizi nezinhlobo motor-imishini: ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekezwa of abanikazi
Uthishanhloko isithuthuthu iyunithi sekushintshile kusukela esikhathini Gottlieb Daimler
Stels Vortex 150 - isilo yami kancane futhi emnene
Ungakhetha kanjani i-scooter? Amathiphu amahlanu
Uyini umshini wokubonisa izinga lejubane kanye odometer? Umehluko phakathi amadivayisi
Tyres Goodyear Ultragrip Ice Arctic: kuzibuyekezo, izintengo
Stylish manicure Mint (isithombe)
Ihhotela Golden Wesithombe ekhasini 4 * (Golden Sands, Bulgaria) izithombe kanye nokubuyekeza
Amaphilisi ikhanda ngesikhathi sokukhulelwa. Izidakamizwa ukuthi kufanele kuthathwe ngokuqapha
"Megaphone" tariff "Emhlabeni Wonke": yamanani okuxhumana evumayo ngenkathi izula
Plain lodonga - version jikelele we-decor Ingaphakathi
Roses kusuka foamirana. ngenalithi Amashabhu
I-Magic Mantras Eyiqiniso
Izinhlobo ezinkulu ezobuciko